Anyị factory kemgbe afọ 10, na anyị na-mgbe niile na-agbalị kasị mma na-enye ngwaahịa na bụ zuru okè n'ihi na anyị ahịa, anyị na-elele ọ bụla mpempe tupu eziga, anyị na-atụ ọ bụla mpempe n'aka ndị ahịa anyị dị mma na-eru. Ma anyị maara na naanị ngwaahịa ochie adịghị ezu, iji nyekwuo nhọrọ maka ndị ahịa ịhọrọ.This a ka anyị mepụtara ihe atọ, ihe ndị a nwere ọdịdị nke oge a amd siri ike ọrụ. abụọ mpempe igwe ikuku na otu ihe nhicha ọkụ, ka anyị lee anya.
CY102-16, ihe a bụ igwe ikuku ikuku abụọ, akụkụ ọla niile nwere ike dị ike. Ọ dị ka ọdịyo, yana ngosi ọkụ, ọ dị mfe ịrụ ọrụ, wee kwụsị akpaka, na-enye ndị ahịa mmetụ dị mma nke iji. Anyị nwere ike mee agba dị iche iche maka ndị ahịa, ngwaahịa ahụ ga-ama mma.
Ihe a emechaala imewe, anyị ga-eme ihe eji achọ mma na obere ahụ ya, yabụ ọ ga-adị mfe iburu, ọ bụrụ na ndị ahịa chọrọ, anyị nwere ike itinye batrị n'ime ya, enwere ike weghachite USB na nkwụnye ọ bụla. n'ihi na enwere ike iji ya na-enweghị waya, ọ ga-adaba adaba ma nwee ike ịchekwa oge maka ndị na-egbu ya .agbanyeghi na ọ pere mpe, ọ nwekwara ike ibugharị taya na obere oge. echegbula maka ọnụahịa ahụ, ọ ka na-adọrọ mmasị.
VC-113 bụ ihe nhicha ọhụrụ, ọ nwere obere ahụ, yana nnukwu ikike ịmịkọrọ ihe, ọ dị ka iko, ị nwere ike itinye ebe ọ bụla ịchọrọ, n'oche ụgbọ ala ma ọ bụ na sofa n'ụlọ, ọ gaghị ekwe ị gbadata n'ihi ọdịdị dị mma.ọ dị mfe iji wepu ájá na granule, ọbụlagodi kọfị nke wụsara na akpachapụghị anya. Anyị nwere ike ịme ọtụtụ agba dị iche iche maka onye ahịa, ma bipụta akara na ahụ nke ngwaahịa ahụ.
Na afọ ọhụrụ, anyị nwere ike na-ekwenyere ndị ọzọ ahịa na-enwe ihe ndị enyi si ụwa, m kwere na ọ ga-abụ ihe magburu onwe afọ!